इजलासमा राणा रवाफ !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रधिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भए । ती सबै रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका यी रिटको बिहान ११ बजे हुने भनिए पनि १२ बजे मात्र सुरु भयो ।
सुनुवाइ सुरु भएसँगै बाहिर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध चर्को नाराबाजी पनि सुरु भयो ।सर्वोच्चसँगै जोडिएको नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा संवैधानिक इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको थियो । प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न वकिल र रिपोर्टिङका लागि खटिएका पत्रकारको भीड लागेको थियो ।
बहस सुरु भएसँगै, अन्तरिम आदेश आउला कि नआउला भनेर हलमा वकिलहरूले अड्कल काटिरहेका थिए । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अधिवक्ताबीचको सवालजवाफ रोचक सुनियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा बारम्बार जंगिए । अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीलाई त राणाले बहस गर्नबाटै रोकिदिए ।
संसद् विघटनपछिको परिस्थिति औँलाउँदै अधिवक्ता सुजन नेपालले भने, ‘श्रीमान, सडकमा विरोध प्रर्दशन भइरहेको छ । आन्दोनल चर्किएको छ । यता अदालतमा बहस भइरहेको छ । श्रीमानले, अन्तरिम आदेश दिनुपर्‍यो ।’ जसरी पनि संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका नेपालमाथि प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासमै जंगिए । राणाले चर्को स्वरमा भने, ‘तपाईं अदालतलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो ? बस्नोस् ।’
इजलासमै प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि नेपाल बहस छाडेर बाहिरिए । अन्यभन्दा धेरै समय बहस गरेका अधिवक्ता रुद्र शर्माले नेपालको संविधानले बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संसद् भनेको विश्वास बनाएर जाने ठाउँ हो । प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । संसद् विघटन गर्ने यो संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्मा आएर फेस गर्ने हो । श्रीमान, अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ ।’
शर्माले बोलिनसक्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले बीचमै सोधे, ‘नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुअघि के भनेर संसद्मा जानुपर्थ्याे भन्नोस् ?’
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले तर्क दिए, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागे । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरियो । हाम्रो संसदीय प्रणाली संविधान बमोजिमको प्रणाली हो । संविधानवाद तोडेर जनतामा जाने भनियो । यो गलत भयो ।’
प्रधानन्यायधीश राणाले फेरी प्रश्न गरे, ‘जनमत प्राप्त दलले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?’ अरू विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको जिकिर गरिरहेका शर्मालाई राणाले फेरी प्रश्न गरे, ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ तर, माध्यम कुन हो भन्ने बहस होइन ? निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भयो । अब म जनतामा जान्छु भन्यो भने तिमीले नै अनिवार्य सरकार चलाऊ भन्ने हो र ?’
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद् विघटन संविधान विरोधी, अन्यायपूर्ण, दुराचारपूर्ण, अविवेकी र तानाशाही कदम भएको जिकिर गरे । इजलासमा बहसका लागि उभिएका अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवलाई बिचमै रोक्दै प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘तपाईको मुख्य कुरा के हो ? माग के हो ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले बिचमै रोकेपछि अलमलिएका यादवले भने, ‘संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको संसद् विघटन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ ।’ प्रधानन्यायाधीश अधिवक्तामाथि हाबी हुन थालेपछि एशोसिएसनको हलमा बसेर प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका अधिवक्ताले गुनासो गरे, ‘यो त भएन नि ! यसरी वकिललाई थर्काएर के हुन्छ ?’
राणाले अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीको त कुरै सुन्न चाहेनन् । बहस गरिरहेका बोगटीले ल्याप्चे शब्द बोलेपछि राणा रन्किएका थिए । बोगटीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले ल्याप्चे लगाइन् ! त्यसरी नै अदालतबाट पनि ल्याप्चे नलगाइयोस् !’
यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा बम्किए, ‘यस्ता शब्द नबोल्नुहोस् । के बोल्नुभएको यस्तो ? के हो ल्याप्चे भन्या ? भयो तपाइको म (कुरा) सुन्दिनँ ।’
प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि बोगटी बहस छाडेर बाहिरिए । प्रधानन्यायाधीश बारम्बार झोक्किएपछि इजलासको मात्र होइन एशोसिएसनको सभा हल पनि तात्तियो । सभाहलमा राणाको पक्षविपक्षमा कुरा चले । रिट निवेदकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नैपर्ने माग राखे । उनले थपे, ‘विघटनको सिफारिस लिएर जानेले राजीनामा पनि लिएर जानुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि त्यसले चुनेको प्रधानमन्त्री पनि रहेनन् । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि रहेनन् । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनसँगै राजीनामा दिने गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बद्नियत गरेका छन् ।’
त्रिपाठीसँग सवाल गर्दै प्रधानन्याधीश राणाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभए त प्रधानमन्त्री त्यसै नहुने होइन र ? प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट छैन र ?’ आफूभन्दा अघिल्ला अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेको प्रश्नको जवाफ त्रिपाठीले दिए, ‘बहुमत प्राप्त दलले म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन ।’ राणाले फेरि बिचैमा रोक्दै सोधे, ‘बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’
‘हो’ त्रिपाठीले भने, ‘बहुमत छ, तै पनि सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन । जसरी पनि चलाउनुपर्छ ।’ बहसका क्रममा त्रिपाठीले पनि अरू अधिवक्ता जस्तै बारम्बार अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे । ‘श्रीमान, अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । संसद्को नियमित कारबाही जारी राखौँ । संसद् चलाउन दिनुपर्छ र संसद् भंग गर्ने निर्णय रोक्नुपर्छ ।’
त्रिपाठीलाई रोक्दै फेरी राणाले सोधे, ‘त्यसो गर्दा संसद्ले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यो बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ ।’ प्रधानन्यायधीशले यति भनेपछि इजलासमा चर्काचर्की सुरु भयो । चर्काचर्कीमाझ नै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘संसद्बाट कुन दलले कति सिट ल्याएको छ भन्ने सुनौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र मगाउँ अनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट पनि प्रतिनिधि मगाएर एमिकस क्युरी गठन गरौँ । अनि बहस गरौँ ।’
हलमा प्रत्यक्ष्य प्रसारण हेरिरहेका अधिकांश अधिवक्ताले अनुमान लगाए, ‘अन्तरिम आदेश आउँदैन ।’ केही बेरमा कारण देखाउ आदेश जारी भयो । यससँगै सर्वोच्चले १९ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग संसद् विघटनको निर्णयको सक्कल प्रति मगाएको छ ।
सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयसँग सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको मिति र समय खुल्ने सक्कल प्रस्ताव तथा प्रतिनिधिसभामा रहेका दल र तिनका सांसदको नाम/संख्या खुल्ने सम्पूर्ण विवरण झिकाउने आदेश दिएको छ । नेपाल बारबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बारबाट २ जना कानुन व्यवसायीको एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णयसमेत अदालतले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, १९:००:००